को गणना लागि क्षतिपूर्ति निष्कासन - सबै वकिल दुनिया मा! कानूनी क्याफे वकिल संग अनलाइन.
को गणना लागि क्षतिपूर्ति निष्कासन
संख्या दिन छुट्टी
अधिकांश खारेज वा कर्मचारीहरु खारेज गरिएको छसाथै लेखाकार मा व्यस्त हो जो चार्ज तिनीहरूलाई पैसा. चिन्ता हो भन्ने प्रश्न तिनीहरूले सामना गर्दै गणना गर्दा क्षतिपूर्ति लागि निष्कासन । यहाँ सबै कुरा एकदम सरल छ. र तपाईं मा निर्देशन पालन विस्तार. त्यसपछि प्रत्येक कर्मचारी मौका छ गणना गर्न आफ्नै मा कति उहाँले प्राप्त हुनेछ मा निष्कासन । जो मामला मा गर्नुपर्छ क्षतिपूर्ति भुक्तानी मा पूर्ण लागि प्रयोग नगरिएको छुट्टी छ । पहिलो. यो लायक छ कि भन्न क्रम मा प्राप्त गर्न को पूर्ण राशि क्षतिपूर्ति को एक कर्मचारी काम गर्नुपर्छ मा उद्यम लागि कम्तीमा महिना. मात्र त्यसैले उहाँले मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ सामान्य वार्षिक बिदा । यस मामला मा. यो गणना भएका छन् निम्न सूत्र प्रयोग गरेर: (.). जहाँ को आकार छ को कर्मचारी गरेको कुल आय लागि निर्दिष्ट पात्रो वर्ष. सामान्यतया यो मूल्य दिन. मा जहाँ एक अवस्था को कर्मचारी प्रयोग थिएन अतिरिक्त छुट्टी लागि काम वर्ष. आफ्नो दिन द्वारा प्रतिस्थापित गर्दै छन्. भने कर्मचारी थियो छैन समय समयमा यस वर्ष छैन भनेर दिन सही गर्न छोड । भने कर्मचारी प्रयोग गरिएको छैन अतिरिक्त छोड्न लागि.
धेरै वर्ष को लागि त सबै दिन उहाँले पर्छ एक निश्चित राशि तिर्न छ । भने कर्मचारी खारेज गर्दा कालावधि अझै छैन म्याद समाप्त. को गणना क्षतिपूर्ति को बिदा मा निष्कासन बाहिर समानुपातिक समय यो छ कि काम गरे । कि घटना मा एक विशेषज्ञ छ बाहिर काम मात्र महिना भुक्तान लागि प्रयोग नगरिएको छुट्टी हुनेछ. गणना गर्न अनुपात मा समय काम गरे । काम गर्दा अन्तर्गत एक अनुबंध को अन्तिम दिन. अनुबंध को नियोक्ता छ तिर्न लागि सम्पूर्ण अवधि को ज्याला. साथै एक विशेष भुक्तान लागि बिदा मा निर्भर गर्दछ. समय को सेवा मा कम्पनी । यदि एक व्यक्ति रोज्ने छोड्न छैन. क्षतिपूर्ति र छोड्न. त्यसपछि उहाँले सही छ लिन पूर्ण यो.
जो पछि उहाँले खारेज गरिनेछ । कहिलेकाहीं.
त्यहाँ छन् जहाँ अवस्थामा एक कर्मचारी छ बस. यो लायक ध्यान गर्न लागि प्रक्रिया को निष्कासन को वरिष्ठ अधिकारीहरु । चार्टर संगठन को निर्धारण को अवधि को काम नेता । निर्देशक सामान्यतया प्रवेश मा एक श्रम अनुबंध लागि केही निश्चित अवधि । मा जनरल सभा को कम्पनीको सहभागीहरू. एक निर्णय गरे भनेर टाउको हुन रह्छ आफ्नो अख्तियार । यो अवस्था को लागि. त्यहाँ छन्. केही सुविधाहरू को समापन संग अनुबंध पछि भुक्तान को क्षतिपूर्ति । भने कर्मचारी प्रदान छैन भन्दा बढी एक वर्षको लागि बिदा. व्यवस्था उल्लङ्घन. जो मामला मा पर्यवेक्षक संग सजाय गरिनेछ दस्तुर समयमा जाँच गर्नुहोस् । नियम भन्न सदस्य कम्पनी बाध्य छन् सूचित गर्न मा निर्देशक लेख्दै को समापन रोजगार अनुबंध. र त्यसपछि खारेज उहाँलाई संग पूर्ण अनुपालन मा हालको कानून छ । एकै समयमा. सबै कि कारण हो भुक्तानी छन् थप. नयाँ सम्झौता निष्कर्षमा पुगे छ.
यो अवधि को हुनुपर्छ जो लागि प्रदान गरेर वैधानिक दस्तावेज हो । तर.
सबैभन्दा कम्पनीहरु छैन अनुबंध समाप्त. तर माथि बनाउन एक सम्झौता निर्दिष्ट मा परिवर्तन को अवधि को दायित्व हो । अब तपाईं थाहा कसरी क्षतिपूर्ति गणना छ जब तपाईं छोड्न. त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्छन् कति आशा प्राप्त गर्न भुक्तानी छ ।.
र प्रशासनिक अपराध - अनुवाद मा रूसी - उदाहरणहरू नेपाली उल्टो सन्दर्भ
Como Obter orientação Jurídica Gratuita